နောက်မြေပုံ NextMapping ™ - အနာဂတ်အလုပ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်း
နောက်မြေပုံ™ - အနာဂတ်အလုပ်ကိုမျှော်လင့်ထား၊
စာအုပ်အသစ်“NextMapping ™ - အနာဂတ်၏အနာဂတ်မျှော်မှန်းခြင်း၊ လမ်းကြောင်းရှာခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်း "ယခုဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်ပါသည် အမေဇုံ.
NextMapping ™ - အနာဂတ်၏အနာဂတ်မျှော်မှန်းခြင်း၊ လမ်းကြောင်းရှာခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်း
ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကထက် ၁၀ ဆမြန်ပြီးယနေ့ Fortune 40 ၏ 500% သည်နောက်ဆယ်နှစ်အတွင်းတွင်မရှိတော့ပါ။ တက်ကြွသောခေါင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့များနှင့်စွန့် ဦး တီထွင်သူများသည်အလုပ်၏အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်ဗျူဟာများကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေ။ လျှောက်ထားရန်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်။
NextMapping ™သည်သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့အစည်းများအားတီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမှုတို့ဖြင့်အလုပ်၏အနာဂတ်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်မည့်ကိရိယာများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အလုပ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုများနှင့်ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်းကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီး Cheryl Cran ကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုအခွင့်အလမ်းနှင့်အားသာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပေးသည်။ NextMapping ™သည်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်မသေချာမရေရာသောကမ္ဘာတွင်အနာဂတ်ကိုပိုမိုတိကျသေချာစွာသွားလာနိုင်ရန်ကူညီနိုင်မည့်အဆင့်များကိုမြေပုံထုတ်ပေးသောသက်သေပြမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ NextMapping ™မော်ဒယ်၏အခြေခံမူများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏အဖွဲ့များနှင့်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်သို့ ဦး တည်သွားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အလျင်အမြန်ကြိုတင်မျှော်လင့်ခြင်း၊
လူ့အပြုအမူနှင့်နည်းပညာအပါအ ၀ င်အလုပ်၏အနာဂတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လမ်းကြောင်းများ
ယခုအနာဂတ်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်ပြောင်းလဲရန်အတွက်သင်လိုအပ်သောအတွေးအခေါ် (၃) ခု
NextMapping ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ™ အနာဂတ်အဆင်သင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကုမ္ပဏီဖန်တီးရန်မော်ဒယ်
အခြားသူများအားအနာဂတ်ကိုပူးတွဲဖန်တီးရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုများကို ဦး ဆောင်ရန်မည်သို့လှုံ့ဆော်ရမည်နည်း
အဆင့်တိုင်း၌လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမည်သူမဆိုဖတ်ရမည့်အချက်
“ Cheryl Cran ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူမပို့ချချက်တွေထဲကတခုကိုကျွန်တော်ကြားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာအနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်နှင့်ယနေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုမနက်ဖြန်ကမ္ဘာသို့ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာစေရန်စိတ်ဝင်စားသောမည်သူမဆိုအတွက်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်များ (အနှစ်တစ်ထောင်နှင့် Get-Z) အသစ်များအားအဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူလာမည့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်မည်သို့တူညီသောကျေနပ်မှုရရှိနိုင်မည်ကိုနားလည်ရန်ဤစာအုပ်ကိုအဆင့်တိုင်းရှိအလုပ်သမားများနှင့်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးဖတ်သင့်၊ ဆွေးနွေးသင့်သည်။ အလုပ်၏အနာဂတ်အဘို့။ ဒီစာအုပ်ကိုကောလိပ်များ၊ ဒီနေ့ပြပွဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်နှင့်တိုးတက်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးထားပါသည်။ ဤစာအုပ်၏အခန်းတစ်ခုစီ၏အဆုံးပိုင်းတွင် Cheryl ၏အရုပ်စာသည် ၀ င်ခွင့်၏စျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ ပညာရေး၊ လက်တွေ့ကျသည့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောသူမ၏ရှင်းပြချက်များကြောင့်နည်းပညာ၊
- Chester အမ်လီ၊ အမေဇုံဖောက်သည်
Cheryl သည်ဇာတ်လမ်းများစွာနှင့်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များကိုပေးသည်။ အကယ်၍ ယခုဖတ်နေခြင်းမရှိပါကသင်အနာဂတ်အတွက်အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ Gen XI သည်စွမ်းအားရှိသည်ဟုခံစားရပြီးယခုမှ စ၍ ကြွယ်ဝသော၊ ဖန်တီးမှုနှင့်လူတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးအတွေးအခေါ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်လိမ့်မည်! ဤစာအုပ်ကိုရေးသားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တောက်ပသောအနာဂတ်အတွက်ကမ္ဘာကိုဝေမျှခြင်းအတွက် Cheryl အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- Alice Fung၊ အမေဇုံဖောက်သည်
“ Freelancer တစ်ယောက်အနေနဲ့ NextMapping စာအုပ်ဟာအနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ပုံကိုပုံဖော်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကငါနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးအချိန်မီတယ်။
- မိုက်ကယ်၊ အမေဇုန်ဝယ်သူ
“ ဒီစာအုပ်ဟာအနာဂတ်မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့စီးပွားရေးဝန်းကျင်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာများနှင့်တိုင်းတာနိုင်သောအဆင့်များကိုဖော်ပြထားသည်။ စာရေးခြင်းနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးစာအုပ်များကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖတ်ရှုနိုင်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ မင်းကတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမျဉ်းကိုရှေ့ဆက်မသွားချင်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်သေချာပေါက်ပြောချင်ပါတယ်။
- ကာရန်အက်စ်၊ အမေဇုံဖောက်သည်
Cheryl သည်ဉာဏ်ရည်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအတွင်းစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းရှေ့တန်းခေါင်းဆောင်များကိုမျှဝေရန်ထူးခြား။ လှုံ့ဆော်မှုရှိသောနည်းလမ်းရှိသည်။ အခန်း ၁ ကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်ငါနည်းပညာ၏အလားအလာနှင့်၎င်း၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်။ လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီ၏ပြန်လည်စုစည်းမှုကိုကြည့်။ လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်အောင်အခန်းတစ်ခုစီအတွက် infographics ကိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဤစာအုပ်သည်အနာဂတ်ကိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင်ခေါင်းဆောင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များကရှင်သန်နေသောအနာဂတ်ကိုမည်သို့တက်ကြွစွာဖန်တီးနိုင်မည်နည်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
- Teresia LaRocque၊ Amazon သုံးစွဲသူ
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားအင်အားရဲ့အနာဂတ်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်စိတ်ကူးနှင့်အသိပညာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးပွားတိုးတက်ရန်နှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အောင်မြင်ရန်ရှာဖွေလိုသူများအတွက်ဤစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
- ခရစ္စတင်း၊ အမေဇုံဖောက်သည်
Cheryl Cran ၏ NextMapping သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်နှစ်ခုလုံး၏ပုံသဏ္theာန်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုပေးသည်။ ငါသူမအတွက်ချုံ့ခြင်းနှင့်ထွက်လမ်းကိုချစ်ကြတယ်။ အဆိုပါကြီးမားတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်ရောက်မှု။ ငါသည်ဤစာအုပ်ကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ်! "
- Shelle Rose Charvet၊ Amazon သုံးစွဲသူ
“ ကျွန်တော်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်သလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းမဟုတ်ပေမယ့်လည်းဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနာဂတ် - အနာဂတ်စီးပွားရေးဝန်းကျင်အပေါ်ရှုထောင့်အသစ်နှင့်ထင်ဟပ်မှုများပေးသည်။ သေချာသည်မှာ၎င်းသည်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များအတွက်အကြံဥာဏ်ကောင်းများပါသောအသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!”
- Wyatt Sze၊ Amazon ဖောက်သည်
“ NextMapping သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မည်သည့်နေရာ၌ ဦး ဆောင်နေသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် AI နှင့်စက်ရုပ်များသည်စီးပွားရေးတွင်အခန်းကဏ္ increasing တိုးပွားလာသည်။ Cheryl Cran သည်အနာဂတ်နှင့်မဝေးလှသောအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုတင်ပြသည်။ သူသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအတိတ်ကာလကပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိသည့်အနာဂတ်ဆီသို့ ဦး တည်နေစေရန်သုတေသနတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိနေရန်အရေးကြီးပုံကိုဆွေးနွေးထားသည်။ Cran ၏အရေးအသားပုံစံသည်ရှင်းလင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ငါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာပျော်တယ်။ ဒီစာအုပ်ကိုစနစ်တကျနဲ့နားလည်လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ရေးပြီးလွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးရုပ်ပုံများနှင့်ဂရပ်များကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်သင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုစိန်ခေါ်ခြင်းစသည့်ကဏ္reallyများကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့၊
- Emerson နှင်းဆီ Craig၊ Amazon ဖောက်သည်
ခေါင်းဆောင်များ၊ အသင်းများနှင့်စွန့် ဦး တီထွင်သူများအတွက်စာဖတ်ရမည်
“ NextMapping သည်အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ခေါင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့များနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအတွက်ဖတ်ရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ကလက်တွေ့ကျတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုလှမ်းပေးတယ်ဆိုတာငါတွေ့ပြီး PREDICT ပုံစံကိုနှစ်သက်တယ်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်! "
- WomenSpeakersAssociation၊ Amazon သုံးစွဲသူများ
“ အနာဂတ်၏အနာဂတ်ကိုလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရောအနာဂတ်အတွက်ပါအရေးပါသည်။ NextMapping သည်စစ်မှန်သောဘဝပုံနမူနာများ၊ ကိရိယာများနှင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြိုခွဲသည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်, သင်၏အောင်မြင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်။ စက်ရုပ်၊ AI၊ ဒေတာနှင့်နည်းပညာများသာမဟုတ်ပါ။ လူများ၊ အသင်းများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ အရောင်းအတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်အနေနဲ့“ The Future is Shared” အခန်းမှာဆွေးနွေးခြင်းဟာအလွန်အင်အားကြီးမားလှသည်။ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏စိတ်နေသဘောထားပြောင်းလဲမှုသည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေမည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုလိုအပ်သည်။ သင့်အနေအထား၊ အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်၊ စီးပွားရေးအခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ နောင်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဆက်လက်၍ တိုးတက်လိုလျှင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပါ။ ”
- Colleen၊ Amazon ဖောက်သည်
ဤစာအုပ်၏စာရေးသူက AI၊ အလိုအလျောက်စက်ရုပ်၊ စက်ရုပ်နှင့်အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်သည့်အရှိန်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များသည်အနာဂတ်၏အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားရမည်ဟုဆိုထားသည်။ ဤအရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည် -“ NextMapping သည်အနာဂတ်ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအစီအစဉ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်” ။ NextMapping အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီသည်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းများကိုသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်အားထုတ်ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သူတို့၏တန်ဖိုးရှိသောအတွေ့အကြုံမှအကျိုးရယူနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဘဏ္financeာရေးနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုနယ်ပယ်များတွင်စက်ရုပ်များ၏သက်ရောက်မှုများကိုအသေးစိတ်ရေးသားသူကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သူမသည်အနာဂတ်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုခန့်မှန်းရန်လူများလုပ်နေသည့်လူနေမှုပုံစံနှင့်အလုပ်ရွေးချယ်မှုများကိုစစ်ဆေးသည်။ တစ် ဦး ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောဖတ်ပါ။ "
- အမ်ဟာနန်ဒက်ဇ်၊ အမေဇုံဖောက်သည်
“ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် AI၊ အလိုအလျောက်စက်ရုပ်နှင့်စက်ရုပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်သည်။ သို့သော်ရိုးသားမှုအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ (အရွယ်အစားအားလုံး) ကိုအမှန်တကယ်လေ့လာရန်၊ စူးစမ်းရန်နှင့်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ထိုအကျိုးကျေးဇူးများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအမှန်တကယ်သတိပြုပါ။ “ NextMapping: အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းခြင်း၊ လမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်းနှင့်အနာဂတ်လုပ်ငန်းခွင်ဖန်တီးခြင်း” သည်ဤအနာဂတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အတိုချုံးဖြိုခွဲထားပြီးအမှန်တကယ်မျက်စိဖွင့ ်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက်၊ မည်သည့်အခါမှဘယ်တော့မှမလုပ်ဟုပြောဆိုသူများပင်လျှင်အားလုံးဖတ်သင့်သည်။ သူတို့၏ကုမ္ပဏီတွင်စက်ရုပ်၊ AI သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပါ။ ဒီစာအုပ်ကနောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ ”
- မေီဖောက်သည် Amy Koller
အဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြည့်ဝ၏တစ် ဦး ကစာအုပ်
၎င်းသည်အလွန်တိုတောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များနှင့်ခေါင်းဆောင်များသည်စီးပွားရေးအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်စီးပွားရေးကိုပိုမိုအလိုအလျောက်ဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင်မြင်မှုဆက်လက်ရရှိရန်အတွက်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များနှင့်ခေါင်းဆောင်များအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်မဟာဗျူဟာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Freelancer တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကုမ္ပဏီအသေးစားအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဤစာအုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီအတွက်အဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီသို့တက်လာစေရန်ကူညီပေးသကဲ့သို့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအားကြီးထွားစေရန်သာမကကုမ္ပဏီတွင်လည်းတိုးတက်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဒီစာအုပ်ကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးကိုအနာဂတ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့နဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မူတည်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
- Shanell၊ Amazon သုံးစွဲသူများ
AI ထိန်းချုပ်ထားသောစက်ရုပ်များနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများတိုးတက်လာရုံမျှဖြင့်နည်းလမ်းများစွာတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော်လည်းလက်တွေ့တွင်အဓိပ္ပါယ်နှင့်အသုံးချမှုများရှိသည်။ Ai သည်နောက် ၁၀ နှစ်မှအနှစ် ၂၀ အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများထဲမှအဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်အပြောင်းအလဲများသည်အလုပ်သမားစျေးကွက်နှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးကိုအခြားဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းမဖြစ်ပျက်သောအရာအဖြစ်မှတ်ယူရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြောက်မြားစွာ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဖြစ်ပျက်နေပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဗီဒီရောင်းသူအများစုသည် Netflix လာခြင်းကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးကြပါ။ စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကြောင့် Uber သည်သူတို့၏ ၀ င်ငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးခဲ့ရသောတက္ကစီယာဉ်မောင်းများအတွက်ရယ်စရာစကားလုံးမဟုတ်တော့ပါ။ သင်ဟာသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား၊ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ CEO လားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ AI မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုသတိထားမိဖို့လိုတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအောင်မြင်မှုရချင်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ရပ်တွေကိုစီစဉ်ထားသင့်တယ်။ ”
- ဗျာစတီဖင် R. Wilson, အမေဇုံဖောက်သည်
တစ် ဦး ကအလွန်အမင်းသတင်းအချက်အလက်စာအုပ်!
“ Nextmapping” သည်လူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောအတုထောက်လှမ်းရေး၊ အလိုအလျောက်စက်ရုပ်နှင့်စက်ရုပ်တို့၏အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည့်နည်းလမ်းများနှင့်အကြံဥာဏ်များပေးသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်စာဖတ်သူသည်စာရေးသူသည်အတွေ့အကြုံကောင်းသူဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ စာရေးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကဏ္ aspects အားလုံးအပေါ်သက်ရောက်သောလျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်လျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း၏အလွန်အရေးကြီးပုံကိုစာဖတ်သူကိုနားလည်စေရန်လက်တွေ့ဘ ၀ များစွာဥပမာများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများကိုတင်ပြသည်။ ငါစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်။ အကြိုက်ဆုံးက PREDICT အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးစာဖတ်သူအားအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ရန်နှင့်၎င်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်ကူညီပေးသည်။ ဤစာအုပ်သည်ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စိတ် ၀ င်စားသောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းခေါင်းဆောင်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည်အလွန်မြင့်မားသောသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပြီးနည်းပညာပြောင်းလဲမှုလှိုင်းလုံးများကြောင့်ကျန်ရစ်ခြင်းကိုမလိုလားသူတိုင်းကိုအကျိုးရှိစေလိမ့်မည်။ ”
- Faith Lee၊ Amazon သုံးစွဲသူ
“ ပုံမှန်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အရစာအုပ်သည်စာရေးသူအကြောင်း၊ နိဒါန်းနှင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းပါသောစကားလုံးများဖြင့်ဖွင့်သည်။ အပိုင်း (၁) တွင်အခန်း ၂ ခန်းပါ ၀ င်ပြီး၊ “ အနာဂတ်သည်ယခုပင်ဖြစ်သည်” ဟုပထမ ဦး စွာရှင်းပြပြီး“ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား” ဟုမေးသည်။ သင်စတင်ရန်စက်ရုပ်များ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၊ AI အစရှိသောများစွာသော ၀ န်ထမ်းသစ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်များအတွက်သင်နှင့်သင်လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခန်း (၂) -“ အနာဂတ်၊ အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း” သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သို့သက်ရောက်မည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရမည့်နေရာကိုဖော်ပြသည်။ အပိုင်း ၂ တွင်“ အနာဂတ်အလုပ်” ကိုလေ့လာသည့်အခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သည်။ ပထမ (အခန်းသုံး)“ အနာဂတ်အလုပ်၏အကြောင်းလမ်းကြောင်း၏စိတ်အတွေးအခေါ်” သည်၎င်းသည်အဘယ်အရာလိုအပ်မည်ကိုအထူးရှင်းပြထားသည်။ အခန်း (၄)“ အနာဂတ်ကိုမျှဝေခြင်း” သည် ၀ န်ထမ်းအသစ်များ၏အတွေးအခေါ်သည်ယခင်နည်းလမ်းများနှင့်လုံး ၀ အသစ်ချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ကွာခြားမည်ကိုရှင်းပြသည်။ ငါးခုသည်“ ယနေ့စိန်ခေါ်မှုများကိုလမ်းညွှန်ခြင်း - နောက်လာမည့်အရာ” ကိုလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အချက်အလက်များအားဆန်းစစ်ထားသည်။ အပိုင်း (၃) တွင်အခန်း ၆ နှင့် ၇ တို့ပါ ၀ င်ပြီး၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ Robots, AI နှင့် Automation တို့ဖြင့် 'ယုံကြည်မှုယဉ်ကျေးမှု' ကိုဖန်တီးရန်လုံးဝလိုအပ်ချက်ကိုရှင်းပြထားသည်။ နောက်ဆုံးအခန်းသည် NextMapping ကို“ သင်၏အနာဂတ်အလုပ်ကိုဖန်တီးပြီးသင်ဖန်တီးထားသောအနာဂတ်ကိုဝေမျှပါ” ကိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။ စာအုပ်တွင်“ အရင်းအမြစ်များ” နှင့်အထောက်အကူအများဆုံးညွှန်းကိန်းများစာရင်း။
ဆွေးနွေးချက် - ဤသည်မှာစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ စီအီးအို၏၊ COO ၏ et.al. ကိုကူညီရန်ပေါ်လာသည့်များပြားလှသောစာအုပ်များမှနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအချက်များများ၏သက်ရောက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရအတွက်။ Cloud ကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့် Quantum Computers ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်စာအုပ်များစွာနှင့်အတူအဓိကပြandနာကြီးထွားနေသောပြdataနာဖြစ်သောဒေတာများဆိုးဝါးစွာတိုးပွားလာခြင်းကြောင့် Automation သည်ယနေ့အထိအကြီးမားဆုံးအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ အချို့သည်မတူကွဲပြားသောမျိုးဆက်များ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြသည်။ ဤစာရေးဆရာသည်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အခြားသူများထက်ဤအရာ၏နောက်ဆုံးသောအကြောင်းအရာများစွာကိုအတူတကွစုစည်းထားခဲ့ပြီး၊ သူတို့ ၀ င်လာသူအသစ်များ၏ထူးခြားသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသာမကအလုပ်သမားအင်အားစုတွင်အစားထိုးထားခြင်း၊ စက်ရုပ်၏ဒေသများ။ AI နှင့်အလိုအလျောက်။ မကြာခဏကထိကများရေးသားသောစာအုပ်အများစုတွင်ကဲ့သို့ပင်“ အချက်တစ်ခုဖြစ်စေရန်” ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်၎င်းကိုလျစ်လျူရှုထားနိုင်သည်။ အားလုံးလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောဤကမ္ဘာတွင်စီးပွားရေးဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်ဗဟုသုတတိုးမြှင့်မှုလိုအပ်ချက်အတွက်အလွန်ထိုက်တန်သောပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။ ဘယ်စာဖတ်သူကိုစိတ်ထဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေမလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး က 'အသင်းများ' ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေရန်အာဏာရှိသူအချို့မှလိုအပ်သောစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အသင်းသစ်များမှဆုံးဖြတ်ချက်များ ချ၍ မလိုလားအပ်သောလူတစ် ဦး တည်းသာမလိုလားသောရလဒ်များကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။ ကုလားအုတ်သည်ကော်မတီမှဒီဇိုင်းဖန်တီးထားသောမြင်းဖြစ်သည်။
- John H. Manhold, Amazon ဖောက်သည်
Cheryl ၏စာအုပ်အသစ်သည်အရေးယူဆောင်ရွက်လိုသောအလုပ်၏အနာဂတ်ကိုလက်ခံလိုသောတက်ကြွသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည်အနာဂတ်၏အနာဂတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အဖိုးတန်သောအချက်အလက်များ၏အထောက်အပံ့ဖြင့်ဤစာအုပ်သည်အနာဂတ်ကိုမည်သို့မျှော်မှန်းရမည်ကိုလေ့လာရန်နှင့်တိုးတက်မှုကိုအောင်မြင်မှုနှင့်အတူလမ်းပြလိုသူအားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ”
- Sebastian Siseles, VP International၊ Freelancer.com
“ စီအီးအိုတစ်ခုအနေနဲ့လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ As အနေဖြင့်၊ စီးပွားရေးအခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ လူမှုရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့် ၄ င်း၏အလားအလာရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်မည့်သင်၏အဖွဲ့အစည်းကို ဦး ဆောင်နိုင်ရမည်။ Cheryl ၏စာအုပ်သည်အနာဂတ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြားရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်လိုအပ်သောအနာဂတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။ ”
- Walter Foeman၊ စီးတီးစာရေး၊ Coral Gables ၏စီးတီး
“ Cheryl Cran ကိုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာသိခဲ့ပြီးပါပြီ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားမှုနှင့်တိုးချဲ့မှုကိုအာရုံစိုက်တဲ့နေ့စဉ်အတွေးအမြင်နဲ့လည်ပတ်နေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကုမ္ပဏီကသူမရဲ့သုတေသနကိုသုံးပြီးသူရဲ့သုတေသနကိုအသုံးပြုပါတယ်။ NextMapping နှင့်အတူ Cheryl သည်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းအား၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများအားအနာဂတ်ကမ္ဘာအတွက်အပြုအမူများနှင့်နည်းပညာများကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက 20 မမြင်နိုင်သည့်နည်းများဖြင့်ဆုံမှတ်များကိုဖြတ်သန်းနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
- John E. Moriarty၊ တည်ထောင်သူနှင့်သမ္မတ၊ e3 ConsultantsGROUP
“ NextMapping သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှခေါင်းဆောင်များနှင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဖတ်ရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အလုပ်၏ကမ္ဘာသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ခန့်မှန်းရခက်လာသည်နှင့်အမျှတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ပိုမို၍ ခေတ်နောက်ကျကာလိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ Cheryl သည်သုတေသနအခြေပြုခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်နမူနာများနှင့်အနာဂတ်အလုပ်၏အနာဂတ်ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးပြီးစာဖတ်သူများအားအရေးပါသောပြောင်းလဲမှုစွမ်းရည်များတည်ဆောက်ရန်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များပေးသည်။ ”
- Liz O'Connor၊ တွဲဖက်ကျောင်းအုပ်၊ Daggerwing Group
“ NextMapping ကအားတက်စရာပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုနောက်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲရန်မဟာဗျူဟာများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ဤစာအုပ်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ Cheryl ရဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချဉ်းကပ်ပုံကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ သူမရဲ့အချက်အလက်အခြေပြုသုတေသနကပရိသတ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်။
- Josh Hveem, COO, OmniTel ဆက်သွယ်ရေး
Cheryl Cran ဟာခေါင်းဆောင်တွေကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ဟောပြောသူနဲ့စာရေးဆရာပါ။ NextMapping သည်လမ်းညွှန်ချက်ကိုရှင်းလင်းရန်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးအနာဂတ်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များပေးသည်။ အပြောင်းအလဲများသည်အရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြောင်းလဲလာသည့်အလုပ်နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဤရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမြင်နှင့်အလုပ်၏အနာဂတ်ကိုဘယ်သောအခါမျှမလိုအပ်တော့ပါ။
- Suzanne Adnams, သုတေသန VP, Gartner
"ဒီစာအုပ်စီးပွားရေးနှင့်ခေါင်းဆောင်မှု၏အနာဂတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လှပသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥာဏ်ပညာနှင့်စီးပွားရေးကယ်တင်ရှင်အားနက်ရှိုင်းသောဗဟုသုတနှင့်လူ့သဘောသဘာဝနှင့်ရှုပ်ထွေးသောလူနေမှုစနစ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ခြင်းတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာစာရေးသူသည်သူရေးသားသည့်အရာနှင့်သူမအကြားရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်အနာဂတ်၌အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသူမ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမျှဝေခြင်းသည်သူမဤစာအုပ်ထဲတွင်ရှင်းလင်းစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးဆင့်ကဲပေါ်ပေါက်လာသည့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ခေါင်းဆောင်၏အခန်းကဏ္embodကိုဖော်ပြသည် စာဖတ်သူကိုအသစ်သောရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆန္ဒများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည့်ဂိမ်း - ပြောင်းလဲသည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
- Danilo Simoni, BLOOM တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
“ အနာဂတ်အလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ Nextmapping ကမီးပြတိုက်တစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သွားလိုသော၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအလုပ်ခွင်သို့တိုက်ရိုက်သွားသောလမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ချပြစဉ်၎င်းသည်မမြင်ရသောကျောက်တုံးများကိုတားဆီးရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Cheryl ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ခေါင်းဆောင်တိုင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများကို ဦး ဆောင်ရန်ယုံကြည်မှုပေးသည်။
- Christine McLeod၊ နေ့စဉ်ခေါင်းဆောင်များ၊ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းနည်းပြနှင့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
အခန်း 1 Preview
Cheryl Cran သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ထွက်ပေါ်လာမည့်“ NextMapping- မျှော်လင့်ထား၊ လမ်းကြောင်းနှင့်ဖန်တီးမှု၏အနာဂတ်အနာဂတ်လုပ်ငန်းခွင်” စာအုပ်၏အခန်း ၁ တွင်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သည်။
အခန်း2Preview
Cheryl Cran သည်အခန်း ၂ တွင်အလျင်အမြန်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံစံ၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်လူ့အပြုအမူပုံစံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်စီမံခြင်းနှင့်သင်၏အနာဂတ်ကိုခေါင်းဆောင်၊ အဖွဲ့ ၀ င်၊ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်အကြောင်းဖြစ်သည်။
အခန်း3Preview
အခန်း3တွင်အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်နှင့်ပြည့်စုံသောအတွေးအခေါ်ဖြင့်အနာဂတ်ကိုသွားလာရန်ဖြစ်သည်။ အသစ်သောအနာဂတ်ရလဒ်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်လက်ရှိအဖြစ်မှန်နှင့်အနာဂတ်အပေါ်အတွေးများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်း။
အခန်း4Preview
အခန်း4သည်အနာဂတ်ကိုမျှဝေခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ စီးပွားရေးကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုခွဲဝေခြင်းများကိုအဓိကထားသည်။ Millennials and Gen Z သည်မျှဝေ။ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အလုပ်လုပ်လိုသည်။
အခန်း5Preview
အခန်း5တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှု၏စိန်ခေါ်မှုကိုရှာဖွေခြင်း၊ လူကောင်းများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်စိန်ခေါ်မှုအချို့ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းနေကြသည်ကိုအဓိကထားသည်။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများအသစ်နှင့်ဖန်တီးမှုဖြေရှင်းချက်လိုအပ်သည်။
အခန်း6Preview
သင်ယုံကြည်မှုယဉ်ကျေးမှုရှိရန်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုကိုဖန်တီးရန်အခန်း6အကြောင်းပါ။ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်မှာအသင်းများသည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊
အခန်း7Preview
ဤအခန်းသည်စက်ရုပ်၊ အိုင်အက်စ်၊ အလိုအလျောက်စက်ရုပ်နှင့်စက်ရုပ်ခေတ်များရှိလူ့အနာဂတ်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်လူ့အလုပ်ခွင်ကိုရှာဖွေနေအလုပ်သမားများ။ ဆိုလိုသည်မှာသုံးစွဲသူနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏အတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့လူသားများပိုမိုအတွေ့အကြုံကိုမည်သို့ဖန်တီးမည်ကိုထောက်ပံ့သောနည်းပညာကိုအဓိကအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခန်း 8 Preview
Cheryl Cran သည်သူမ၏စာအုပ်အသစ်ဖြစ်သော NextMapping- Anticipate, Navigate and Future of Work ၏အခန်း 8 ၏အကြိုမြင်ကွင်းကိုမျှဝေပေးသည်။ ခေါင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားအနာဂတ်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် NextMapping အပါအ ၀ င်အရာအားလုံးအတူတကွလာသည်။
Cheryl Cran သည်ထိပ်တန်းကမ္ဘာအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပြီးမြောက်အမေရိက၏ထိပ်တန်း ဦး ဆောင်ဟောပြောသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်အပါအဝင်စာအုပ်ခုနစ်အုပ်၏စာရေးဆရာဖြစ်သည် “ အပြောင်းအလဲခေါင်းဆောင်မှုအနုပညာ။.
သူမသည်ခေါင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအားတီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ ရှင်သန်နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုမြန်နှုန်းဖြင့်အနာဂတ်၏အနာဂတ်ကို ဦး ဆောင်ခြင်းများကိုကူညီရန်အလွန်အမင်းရှာဖွေသည့်အတိုင်ပင်ခံဖြစ်သည်။ သူမ၏အလုပ်ကို Washington Post, Huff Post, Metro New York, Entrepreneur Magazine နှင့်အခြားအရာများ၌ဖော်ပြခဲ့သည်။